Wed, 05 Aug 2015 04:27:00 +0000
Global Voices Miara-Miombon'Antoka amin'ny The Irrawaddy ao Myanmar
Misy ny fotoana mahaliana ho an'i Myanmar rehefa manohy fanitsiana izy mba ho lasa firenena demaokratika maoderina. Sarotra ny tetezamita ho an'ny firenena izay teo ambany ziogan'ny lalàna miaramila nihoatra ny dimampolo taona saingy tokony hanohy ny fanerena hanaovana ny fanitsiana hatrany ny fiarahamonina iraisampirenena.
Hadio sy hangarahara ve ny fifidianana amin'ny Novambra? Mbola handray tsara ny fampiasambola vahiny ihany ve ny governemanta tohanan'ny miaramila? Inona no paika hahatontosa ny firaisankina sy ny fandriampahalemana eo anivon'ny fifanandrinana ara-poko sy ara-pivavahana?
Ho fanatsarana ny fanangonam-baovao ataonay amin'izay mitranga ao Myanmar amin'izao fotoana izao, dia nandray fiaraha-miombon'antoka tamin'ny The Irrawaddy, fikambanam-panaovan-gazety lohalaharana ao amin'ny firenena amin'ny famoahana vaovao tsy avoakan'ny hafa ny Global Voices.
The Irrawaddy dia natsangan'ireo Birmana mpanao gazety nanao sesintany ny tenany ao Thailandy tamin'ny 1993. Maro amin'izy ireo no nijoro vavolombelona, nanangon-tahiry ary nanatevin-daharana ny fitroarana ara-demaokratika nanantantara tamin'ny 1988.
Ny Gazetiboky The Irrawaddy no famoahan-gazety Birmana mahaleotena voalohany tsy miankina amin'ny vondrona mpisintaka ara-politika. Noho ny tati-baovao mitsikera ataony dia noraran'ny fitondrana miaramila ao Myanmar izy ary izay rehetra ahitana ny dika iray amin'ny gazety dia mety ho voasambotra sy ampidirina am-ponja.
Tamin'ny 2000 no nivoaka ny tranonkalan'ny The Irrawaddy ary voasakana avy hatrany tao Myanmar ka tsy mety takatra avy ao amin'ny firenena ny votoatiny tao anatin'ny 11 taona izao. Rehefa nihamaivana kokoa ny faneriterena ny media tamin'ny 2011 vao mba azon'ny mpiserasera aterineto ao Myanmar novakiana ny The Irrawaddy. Mandritra izany fotoana izany dia azo naely ami'ny fomba ara-dalàna manerana ny firenena ny gazetiboky tamin'ny 2013.
Hatramin'ny nananganana azy dia tsy nitsahatra ny namoaka vaovao tsy ambaran'ny hafa ho ao anatin'ny fijoroana ara-demaokratika ataony ny The Irrawaddy. Mino izy fa kitro ifaharan'ny demaokrasia ny fahalalahan'ny gazety :
Manana finoana matanjaka izahay, ary mino fa raha tsy misy gazety afaka dia tsy feno ny fiarahamonina demaokratika iray. Adidinay ny miaro sy ny manolokolo ny fahalalahan'ny gazety sy ny mampivelatra ny gazety mahaleotena ho afaka amin'ny fitongilanana sy ireo tsindry isankarazany.
Aty amin'ny lafiny misy ny Global Voices dia faly izahay nanao ity fiaraha-miombo'antoka ity noho ny fitadiavanay tantara tsara sy mahaliana kokoa avy ao Myanmar.
Mpanoratra Mong Palatino · Nandika Naomy · Vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra (0) Manomeza · Zarao: twitter facebook reddit googleplus
16.7808323 96.1497192	Ho an'ilay Ethiopiana-Amerikana Mpihira Meklit Hadero, ‘Miova Hatrany ny Trano Hodiana’
Wed, 05 Aug 2015 04:06:43 +0000
Mpanoratra Public Radio International · Nandika Jentilisa · Vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra (0) Manomeza · Zarao: twitter facebook reddit googleplus
41.8780022 -93.0977020	Novahan'i Iran tamin'ny ampahany ny fandrarany ny BBC
Wed, 05 Aug 2015 03:00:33 +0000
Mpanoratra Mahsa Alimardani · Nandika Jentilisa · Vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra (0) Manomeza · Zarao: twitter facebook reddit googleplus
Latest Project updates from Rios de Encontro (Coming Soon) 2 herinandro izayBrazilian Music Legends Caetano and Gil Will Perform in Israel Despite Calls to Cancel 27 Jona 2015As a US State Deals With Its Confederate Flag, One Town in Brazil Flies It With Pride 26 Jona 2015More Europeans Migrate to Latin America Than Vice Versa, Study Finds 23 Jona 2015Matildas’ Awesome Advance to Women's World Cup Quarter Finals: Australia 1 Brazil 0 18 Jona 2015Radio Ambulante Roundtable on Copa América 2015: FIFA Corruption, Team Analyses and Predictions Mpanoratra Eddie Avila · Nandika Candy · Vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra (0) Manomeza · Zarao: twitter facebook reddit googleplus
-5.3811355 -49.1331024	Gazety Henja-Pisainana Nakaton'i Iran fa Nanohitra ny Fifanarahana ara-Nokleary
Tue, 04 Aug 2015 15:37:32 +0000
Mon, 03 Aug 2015 05:30:00 +0000
Mpanoratra Janine Mendes-Franco · Nandika Sylvia Aimée · Vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra (0) Manomeza · Zarao: twitter facebook reddit googleplus
Gadra Politikan'i Azerbaijan sy ny Tetipanoron'ny Fitondram-Panjakana
Sun, 02 Aug 2015 18:40:48 +0000
Khadija Ismayilova, mpanao gazety mpanao fanadihadiana manana ny lazany manerantany. Saripikan'i Abas Atillay, RFER/L. Creative commons.
Toko vaovao eo amin'ny zava-mampalahelo amin'ny rafi-pitsarana ao Azerbaijan ny fipoiran'ireo mpanatrika mameno ireo rafi-pitsarana rehefa misy raharaha goavagoavana, mba tsy hanomezana toerana ireo mpanatrika hafa. Misy ny sasantsasany milaza fa afa-mitoraka vato iray na roa ihany koa izy ireo rehefa ilaina izany.
Nahazo laka tokoa ry zareo nandritra ny fizotry ny raharaha iampangana mpanao gazety fanadihadiana malaza Khadija Ismayilova. Notazonina hatramin'ny desambra i Ismayilova fa voampanga ho mandrisika famonoantena, mandositra hetra, raharaha tsy ara-dalàna, fihoara-pefy amin'ny asa ary ny fanodikodinam-bola.
Nalain'izy ireo ihany koa ny toerana maro tamin'ny fitsarana ireo mpikatroky ny zon'olombelona ,Leila sy Arif Yunus, voampanga tamin'ny herintaona ho manao asam-pitsikilovana an'i Azerbaijan ho amin'ny tombontsoan'i Armenia.
Lazain'ireo mpitsikera avy amin'ny vazantany efatra fa hosoka sy fikendrena hampanginana ireo feo mitsikera ao Azerbaijan, iray amin'ny fitondrana tao amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha ka mpangeja indrindra, ny fiampangana an'i Ismayilova sy i Yunus.
Raisin'ireo mpiasan'ny fitsarana ao an-toerana an-tanandroa tsara ireo mpanatrika fitsarana tsy fantatra anarana ireo, ahafahana misoroka amin'ny alalan'ny fahagagana — na amin'ny alalan'ny fomba fifandraisan-tanana miafina — ny fanarahamason'ny fianakaviana, namana, mpiara-miasa amin'ny toriana rehefa te-hiditra ao amin'ny fotoam-pitsarana izy ireo.
Mitondra finday izay tsy tokony mahazo alalana hiasa ao amin'ny lapan'ny fitsarana ry zareo, ary mibahana ny ankamaroan'ny seza ao amin'ireo efitry ny lapan'ny fitsarana tery dia tery. Rehefa atonin'ny mpanao gazety ry zareo dia milasa fa tapaka sy naman'ny olona toriana nefa tsy mahalala na inona na inona momba ilay toriana akory.
Saingy toa tsy mitoetra ho mpanatrika mangina ny fotoam-pitsarana fotsiny izy ireo.
Nandritra ny fotoam-pitsarana an'i Ismayilova, izay nanomboka tamin'ny 24 Jolay, misy ireo sasantsasany tamin'ny Mpanangom-baovaon'ny gazety Azerbaijani ao an-toerana izay tratran'ny trindrihazolena nikasa haka sary tao ambadiky ny lapa izay nifampihaonan'ny mpanohana an'i Ismayilova. Voatora-bato anefa ry zareo hanakorontanana azy ireo.
Tsy nisy ny nanono-tena ho tompon'andraikitra tamin'ny fanafihana. Saingy raha tsy asan'ny fikambanana miafina ary io dia iza no nanao izany?
Fihaonan'ny mpanohana ilay Azerbaijani mpanao gazety fanadihadiana Khadija Ismayilova eo ivelan'ny lapan'ny fitsarana izay iatrehany ny fotoam-pitsarana.
Amin'ny fisian'ireo mpanatrika tsy fantampantatra mibahana ny toerana tsara rehetra dia voatery nitsangana sy niandry tao ivelan'ny lapa, mihiaka ny anaran'i Khadija ho fanohanana azy sy mitehaka mafy araka izay tratra, ny namana sy ny mpiara-miasa amin'i Ismayilova.
Tsy mahazo miditra amin'ny Lapan'ny Fitsarana ao Baku ny mpikatroka tamin'ny fanombohan'ny fitsarana an'i Ismayilova: Mpanohana ny mpanao gazety Khadija Ismayilova …
Kinga amin'ny fisandohana ara-politika ny fanjakana Azeri. Fenoiny vato avy hatrany ny vata [fifidianana], fenoiny lainga ny gazety, ary ankehitriny, toa hita fa fenoina mpanatrika “sandoka” ny lapan'ny fitsarana.
Mpanoratra Arzu Geybullayeva · Nandika Jentilisa · Vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra (0) Manomeza · Zarao: twitter facebook reddit googleplus
Sun, 02 Aug 2015 07:34:41 +0000
Mpanoratra Iran Voices · Nandika Mamisoa · Vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra (0) Manomeza · Zarao: twitter facebook reddit googleplus
35.2784271 46.9938736	Habaka Fandraharahana Norahonan'ny Mpanao Sivana Rosiana Noho Ny Lahatsoratra Miresaka Bitcoin
Sun, 02 Aug 2015 05:48:17 +0000
Mpanoratra Darina Gribova · Nandika Mamisoa · Vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra (0) Manomeza · Zarao: twitter facebook reddit googleplus
Raha Toera-Pisotroana i Afrika? Mifanohina ny Samy Afrikana
Sat, 01 Aug 2015 19:59:24 +0000
Toera-pisotroana ampahibemaso ao Joe Slovo Park, Le Cap, Afrika Atsimo. Sary Creative Commons nampidirin'ny mpisera Wikipedia Discott.
Misy ny fotoana mba samy mifanohina ao amin'ny Twitter ny samy Afrikana. Nisy sioka kinangananga natombok'i Siyanda- Panda, mpanoratra iray avy ao Botswana, niteraka ity diezy #IfAfricaWasABar [Raha toera-pisotroana iray i Afrika] ity.
Nanontany i Siyanda :
Raha toera-pisotroana iray i Afrika, inona no nosotroina/nataon'ny firenenao?
Toa masimasina zavatra zaraina i Nizeria sy i Kenya :
#IfAfricaWasABar Kenya would be that guy who takes photos with other people's drinks
— Mayor_wa_kashagama (@Norman_Kamuntu) July 27, 2015
Raha toera-pisotroana iray i Afrika, i Kenya dia ho ilay boay maka sary miaraka amin'ny zava-pisotron'olon-kafa
#IfAfricaWasABar Kenya would the guy who owns the bar,the cabs outside,the butchery next door and the chemist across the road.
— Kenyan Facts (@KResearcher) July 27, 2015
Raha toera-pisotroana iray i Afrika, i Kenya dia ho ilay boay tompon'ny bara, pikla ao ivelany, mpivaro-kena ny eo anilany ary mpivaro-panafody etsy ampita.
#IfAfricaWasABar …Nigeria would be that guy that's old enough to be in the bar but he has a fake ID saying he's 19
Raha toera-pisotroana iray i Afrika … i Nizeria dia ilay boay efa zokinjokiny ao amin'ny bara nefa manana kara-panondro sandoka milaza va 19 taona izy
#IfAfricaWasABar Nigeria would be the fat rich dude trying to dance with every girl.
— WILL SESSIONS (@OfficialBafmiQ) July 27, 2015
Raha toera-pisotroana iray i Afrika i Nizeria dia ho ilay boto mpanakarena miezaka ny hiara-mandihy amin'ny sipa rehetra hitany.
#IfAfricaWasABar Nigeria would be that noisy guy who is always looking for attention.
— Ikua Macharia (@Di_Macharia) July 27, 2015
Raha toera-pisotroana iray i Afrika, i Nizeria dia ho ilay bandy be tabataba izay te-hojerena hatrany.
#IfAfricaWasABar the dee-jay would be Nigerian
Raha toera-pisotroana iray i Afrika, ho Nizeriana ny DJ
Madagasikara dia ilay jomoka be, araka an'i @Nanjala1:
#IfAfricaWasABar Madagascar would be the girl who came alone, had a drink and a dance, and left before anyone noticed.
Raha toera-pisotroana iray i Afrika, i Madagasikara dia ilay sipa tonga irery, nisotro sy nandihy, dia nandao ny toerana mialoha ny hanamarihan'ny rehetra azy.
Zimbabwe mbola hifikitra any amin'ny lasa, hoy ny siokan'i @Captain_FBS :
#IfAfricaWasABar Zimbabwe would be that guy who annoys everyone about “back in the day when I used to have money”
— Goddy (@Captain_FBS) July 27, 2015
Raha toera-pisotroana iray i Afrika, i Zimbabwe dia ilay bandy manelingelina ny rehetra amin'ny “fotoana nananany vola[be]” [naotin'ny mpandika amin'ny teny malagasy : Any Zimbabwe ilay efa amina arivo miliara ny sandan'ny vola miasa any]
Tanzania ataon'ny mpamazivazy vitsy fihomehezana:
#IfAfricaWasABar …Tanzania would be that group of girls that dont get approached all night so they claim it was a “Girls Night Out” anyway
Raha toera-pisotroana iray i Afrika, i Tanzania dia ho andiana sipa tsy misy manatona nandritra ny alina dia lazain-dry zareo fa “Fiarahan'ny Sipa Mivoaka” anie iny e
#IfAfricaWasAbar Tanzania would be that guy whose English takes a walk when he gets drunk
— Elektrolyte (@julimuffn) July 27, 2015
Raha toera-pisotroana iray i Afrika, i Tanzania ilay bandy lasa mahay miteny anglisy eny an-dalana rehefa mamo
Ethiopia tsy hatahotra ny fandoavana ny vola rehetra, izany no vazivazin'i @Chrisposure :
#IfAfricaWasABar all the guys would be sending over drinks to Ethiopia.
Raha toera-pisotroana iray i Afrika, handefa ny zava-pisotro rehetra any Ethiopia ny bandy rehetra.
Na ny Boko Haram aza mety ho ao amin'ny bara :
#IfAfricaWasABar #BokoHaram would turn up for Ladies night like… pic.twitter.com/6kgMI5Zai1
Raha toera-pisotroana iray i Afrika, ho lasa any amin'ny alin'ny vehivavy ny Boko Haram
Voasaringotra ao amin'ny siotsioka ihany koa i Etazonia, i Shina ary i Eoropa :
#IfAfricaWasABar Europe and China would be very very drunk….
Raha toera-pisotroana iray i Afrika, ho mamo tampina i Eoropa sy i Shina…
#IfAfricaWasABar in an expensive hotel, there would be A LOT of sleazy old white men creeping the place out.
Raha toera-pisotroana iray ao amin'ny trano fiavahiniana lafovidy i Afrika, dia ho BETSAKA lahiantitra fotsy voretra mivembena eo ivelany
#ifafricawasabar the U.S. & Europe would be lecturing everyone about drinking too much, all the while topping up their glasses.
— samira sawlani (@samirasawlani) July 27, 2015
Raha toera-pisotroana iray i Afrika, i Etazonia sy i Eoropa ho be fananarana amin'ny rehetra amin'ny fisotroana be loatra, sady mampakatra ny verany ambony amin'izany fotoana izany.
Mpanoratra Prudence Nyamishana · Nandika Jentilisa · Vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra (0) Manomeza · Zarao: twitter facebook reddit googleplus